WAR DEG DEG: Dagaal xooggan oo hadda ka socda deegaanka Calamada ee gobolka Sh/Hoose | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR DEG DEG: Dagaal xooggan oo hadda ka socda deegaanka Calamada ee...
Calamada (Halqaran.com) – Warar goor-dhow soo gaaray xafiiska warqabadka Halqaran.com, ayaa sheegaya, in deegaanka Calamada oo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose uu hadda ka socdo dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada DF Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Dagaalkan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Ciidamada Booliska ee ku sugan deegaanka Calamada.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbraahinta Halqaran.com ayaa sheegay, in dagaalka uu halkaasi ka socdo, ciidamo badan oo Al-Shabaab ka tirsana ay weerarka soo qaadeen.
“Ciidan badan oo Al-Shabaab ayaa soo weeraray Calamada dagaalkana wuu socdaa oo Ciidamada Booliska calamada degan ayaa la soo weeraray.” ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka
Deegaanka Calamada ayaa dhawaan waxaa la dajiyay Ciidamo Bolis ah, kadib markii Ciidamadii Militariga ee halkaasi Isbaarada u taalay laga qaaday.
Ciidan gurmad ah ayaa waxa ay ka baxeen Isgoyska Excontrol Afgooye si ay u gaaraan goobta dagaalka uu ka socdo.
Wixii warar ah ee ku soo kordha kala soco Halqaran.com, Insha allaah.
Dagaal xooggan oo ka socda Shabeellaha Hoose
Shabaab iyo Dowladda